Nacho Montoto, mudetembi weCordovan, anofa aine 37 | Zvazvino Zvinyorwa
Nacho Montoto, mudetembi weCordovan, anofa
Carmen Guillen | | Vanyori, Literature, Noticias
Nhasi takamuka nenyaya dzinosuruvarisa dzekufa kwaNacho Montoto kune 37 makore. Cordovan mudetembi uye director weyekupedzisira mabhuku mabhuku Cosmopoetics kupemberera. Sekureva kwenzvimbo dzekuziva, kufa kwake kwakakonzerwa nechirwere chemwoyo, kunyangwe iyo data kubva kuongororo yechirwere ichakamirira.
Kunyangwe hazvo basa rake renhetembo, zvinosuwisa, rakave pfupi, akawana iyo Young Andalusia Prize yeNhetembo muna 2013. Tine mabhuku enhetembo anotevera akaburitswa:
"Guta remagirazi", chikwangwani, muunganidzwa Poesía Nueva Juan Ramón Jiménez de Fondo (2007).
"Mvura yekupedzisira", chinyoreso (Ndima del sol, 2008).
Yangu ndangariro isiraidhi - Nzvimbo dzisingagone (Cangrejo Pistolero Editions, 2008).
"Zvakawandisa" (Cangrejo Pistolero Editions, 2010).
"Mushure mechiedza" (La Garua, 2013).
"Tambo yadambuka", Nezvaakapihwa 2013 Andalucía Joven Award (Renacimiento, 2014)
"Tiri tese, hapana munhu pano" (Iyo ina Mhepo Unganidzo. Renaissance, 2015).
Mukuwedzera pakunyora nhetembo, aive zvakare munyori uye mutsoropodzi wezve Diario Córdoba, «MaSouth Notebooks » nemagazini yacho Chiteshi.
Yake blog: «Mapepa uta zvisungo»
Akanyora pano neapo pane rake blog rakanzi «Paper Bow Ties», iyo iwe yaunogona kushanyira mune izvi link. Ikoko, kunyora kwake kwekupedzisira yaive nhetembo isina kunyorwa iyo yaakatumidza "Nhau":
Gungwa rakanga riri chimbuzi. Mitumbi yakatenderera yakazvimba,
kuzvimba, pepuru uye chena; kunyangwe iyo
Kuwanda kwehuswa hwegungwa kwakamumbundira makumbo ake. Hazviite
dai rombo rakanaka kufamba navo usiku ihwohwo.
Kwakanaya pamusoro pemafungu, pamamonya emasaisai ayo
Vakakunda kukunda vakashinga
iyo… kune vakashinga iyo… kune zvipikirwa izvo… kune iyo
zviroto izvo ... kune ramangwana iro ...
Mukadzi ane makore gumi nematanhatu chete anombundira mwana wake mu
pasi pegungwa. Pasi pechakaipa.
Masaisai matsva ari kuswedera kumahombekombe, achitakura pachiuno chawo
zviroto zvehupenyu huri nani hwakazorora mu
Kudzika kwegungwa, kunotakura mukombero waro
mhere, tariro negomba rakadzika-dzika.
Nyika ino chikara chinoonekwa chichibva kure.
Isu, isu, tinogara murunyararo. Isu tinoziva iyo
runyararo rwemutauro nekutenda kumibhedha yedu
kupisa, kumasofa edu eIkea nekutenga kwedu
vhiki nevhiki muCarrefour.
Masaga madiki emvura anoonekwa munhau.
Kutya, kusabatsira uye kusvotwa pakati pegungwa.
Vanozviona pachavo vachiuya.
Kunge mitumbi iyo husiku inoswedera kuna
kumucheto kwemibhedha yedu sezvatinovatarisa, mukati
kunyarara, mune chinzvimbo chinoratidza chisina kuzivikanwa uye
mumwe munhu ari pakati penzira, panguva iyoyo, ipapo
Mharidzo dzaMwari dzinoonekwa dzichiuya. Kwayedza inofambira mberi
uye jeti remwedzi chinyararire rinoperekedza mudungwe.
Gungwa rinozevezera mazita avo mambakwedza. Mafungu akakwirira iyo
iri kuisa rimwe nerimwe, ichiumba mirwi mukati
mahombekombe; iyo mukati yakanyorova, iyo viscera yakanyura, iyo
Fungisisa zvishoma, mangwanani anotevera, iyo
Nhau dzerufu hadzimbofi dzinonakidza, asi zvakanyanya kushoma kana zvasvika kune wechidiki akadaro. Kubva Zvazvino Zvinyorwa tinoda kutumira meseji kubva tsigira mhuri yako neshamwari. RIP Nacho Montoto.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Nacho Montoto, mudetembi weCordovan, anofa
Puff, zvinonzwisa tsitsi sei. Sezvaunotaura kumagumo, chakanyanya kushata nezvekufa ndechekuti kana chiri chechidiki ... Rutsigiro rwese nerudo kumhuri, ichave ichange iine nguva inotyisa.
Antonio Todriguez akadaro
Nacho agara ari mudetembi wechidiki. Iye akatofunga kuti aive nemakore gumi mudiki. Aive munhu asingagadzike uye ane rupo. Nyanduri anodenha zvakare. Aigara achiuya nemaprojects. Akanga ari mhando yemunhu aisafanirwa kunge akanyangarika kweanosvika makumi mashanu emakore. Ini handizive mhuri yake asi ini ndinovapa hug. Ini ndiri munyori wekare weCordoba uyo anogara muJalisco. Antonio Rodtiguez Jimenez.
Pindura kuna Antonio Todriguez
Zvikonzero zvakapihwa KUSA kuverenga. Varipo zvechokwadi here?
Vanyori vanoenda kuruzhinji rwevanhu mugore rino 2017